Lionel Messi Oo Barcelona Kaga Nixiyey Xaqiiqo Jirta & Heshiiska Kooxdiisu Ku Doonayso Lautaro Martinez Oo Uu Ka Hadlay - Gool24.Net
Lionel Messi Oo Barcelona Kaga Nixiyey Xaqiiqo Jirta & Heshiiska Kooxdiisu Ku Doonayso Lautaro Martinez Oo Uu Ka Hadlay
Xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi ayaa kooxdiisa farta ka saaray xaqiiqo jirta oo taageereyaasha iyo maamulkaba ka nixisay, kaddib xili ciyaareed aanay qaab wanaagsan ku jirin iyo laba sannadood oo ka horreeyey oo ay tartanka Champions League kaga hadheen wareegga semi-finalka oo ay Roma iyo Liverpool qalbi jab ku rideen.
Messi oo ah kabtanka kooxda ee uu culayska ugu weyn ku dhacayo, waxa uu nefis ka galay cadaadiskii badnaa intii ay ciyaaruhu fasaxa ku jireen oo laga soo bilaabay badhtamaha bishii March, laakiin hadda ayay dib ugu soo laabteen tababarka ciyaartoyda Barcelona iyaga oo isku diyaarinaya qaybta hadhay horyaalka LaLiga iyo tartamada kale.
Barcelona oo hoggaanka horyaalka LaLiga ku haysa laba dhibcood oo ay Real Madrid ka horreyso, waxay barbarro 1-1 ah waddanka Talyaaniga kula soo gashay Napoli lugta hore ee wareegga 16-ka tartanka Champions League, halkaas oo ay safar ku tagtay bishii February, hase yeeshee kulankii labaad ayaa loo baajiyey fayraska.
Lionel Messi oo waraysi siiyey wargeyska Sport ee kasoo baxa waddanka Spain ayaa la weydiiyey haddii uu Champions League dib u bilaaban karayo bisha August sida la qorshaynayo, laakiin waxa uu su’aashan u qaatay xaaladda ka jirta kooxdiisa oo uu xaqiiqadeeda bannaanka ku keenay.
Messi waxa uu shaaciyey in kooxdiisa Barcelona uu ku kalsoon yahay laakiin sida ay hadda u ciyaarayaan amaba xili ciyaareedkan ay ahaayeen aanay haba-yaraatee wax guul ah ku gaadhi karaynin, waxaanu yidhi: “Waligay shaki maan gelinin kooxda aanu haysano, shakina igagama jiro in aanu ku guuleysan karto dhamaan waxa hadhay laakiin maaha sida aanu hadda ku ciyaarayno.
“Waqtigan, cid kasta fikirkeeda ayay leedahay, dhamaantoodna waa kuwo la ixtiraami karayo. Aniga wuxuu ku sallaysan yahay xaqiiqada ah inaan nasiib u yeeshay inaan sannad walba ciyaaray tartanka Champions League, waxaanan ogahay in aanay suurtogal ahayn inaanu ku guuleysano anaga oo u ciyaarayna sidii aanu u ciyaarnay. Laga yaabaa in Setien in uu qalad fahmo.”
Xiddiga reer Argentine waxa kale oo uu ka hadlay laacibka ay isku waddanka yihiin ee Lautaro Martinez oo ay Barcelona doonayso, waxaanu yidhi: “Haddii aan si daacad ah u hadlo, si fiican uma garanayo haddii ay socdeen wada-xaajoodyo hadda, wax fikir ah kama hayso.
“Waxay ila tahay in waqti horeba aan tilmaamay in Lautaro uu yahay weeraryahan cajiib ah, sababtoo ah, waa weeraryahan dhamaystiran.
“Wuu xooggan yahay, wuu xarfatami karaa, goolasha ayuu dhaliyaa, waxaanu yaqaanaa sida loo ilaashado kubadda…Laakiin, waynu eegi doonaa waxa ugu dambaynta ku dhaca isaga iyo ciyaaryahannada kale.”